स्वास्थ्यमा ९ र १० औं तहका ३०३ कर्मचारीको पदस्थापन, को कहाँ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
स्वास्थ्यमा ९ र १० औं तहका ३०३ कर्मचारीको पदस्थापन, को कहाँ? (सूचीसहित)
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ९ र १० औं तहका कर्मचारीको पदस्थापन गरेको छ। मन्त्रालयले २६१ डाक्टरसहित ३०३ जना कर्मचारीको पदस्थापन गरेको हो। सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस्
ट्याग्स: कर्मचारी पदस्थापना, कर्मचारी समायोजन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय